छि*टो – छि*टो विर्य झर्ने समस्या छ….. अपनाउनुहाेस् यस्ताे बिधि‍‍‍….. -
२०७८ बैशाख ९ गते प्रकाशितetoday
हजुरलाई थाहै हुनुपर्छ, प्राय सबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा शी’घ्र वी,र्य स्खलन भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । अहिले आफू तथा आफ्नो यौ,नजोडीले
चाहेको समयभन्दा चाँडो वी,र्यस्ख,लन भए त्यसलाई शी;घ्र स्खलन मान्न थालिएको छ । यो,निमा घर्षण नै गर्न नपाई यो,निमौ वी,र्य स्ख,लन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौ,न,सम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो । कतिपयले सामान्य समय सीमामै वी,र्य स्खलन भए पनि चाँडो भएको मान्छन् भने कसैले धेरै समय लागे पनि त्यसलाई सामान्य मान्छन् ।
महिलालाई चरमसुख प्राप्त गर्न एकदमै धेरै समय लाग्ने अवस्थामा पनि सामान्य समयमै भएको भए पनि पुरुषको वी,र्य स्ख,,लन चाँडो भएको भान पर्छ । यसको पक्का कारण यही नै हो
भन्न सकिने अवस्था नभए पनि शीघ्र स्ख,लनको मूल कारण मानसिक नै भएको पाइन्छ । कतिपय मानिसमा यौ,न सम्पर्क वा क्रियाकलापमा ‘राम्रो’ गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हुनसक्छ ।
आफ्नो यौ,न जोडीलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्दिन कि भन्ने चिन्ता हुँदा यसले समस्या थप चर्काउँछ । विरलै भए पनि केही psychotropic drug को प्रयोग नै यस्तो समस्याको कारण त होइन भनेर केलाउन बिर्सनु हुँदैन ।
समाधानका लागि के गर्न सकिएला???? आक्कल–झुक्कल शीघ्र स्लखन हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले यस्तो स्थितिमा खासै चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन । धेरै चिन्ता गर्दा समस्या थप वृद्धि हुनसक्छ ।
शीघ्र स्खलनको समस्या नियमित रूपमा हुन थाल्यो भने समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्या कम गर्न आफैंले अवलम्बन गर्न सकिने केही उपाय छन् ।
1. यौ*न सम्पर्क रोक्ने–सुरु गर्ने :यौ;नसम्पर्कका क्रममा स्खलन होला जस्तो भएपछि तुरुन्तै लिं’ग बाहिर झिकेर केही वेर यौ.नक्रीडा रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि पुनस् सुरु गर्ने ।
2. आसन परिवर्तन: लोग्नेमान्छे माथितिर र महिला तलको सट्टा महिला माथितिर बसेर सक्रिय भै यौ;नसम्पर्क गर्दा पनि शीघ्र स्ख,लन कम गर्न मद्दत मिल्छ ।
3. लिं,ग अँठ्याउने: यौ,नसम्पर्कका क्रममा स्खलन होला जस्तो भए तुरुन्तै लि,ङ्ग यो,निबाट बाहिर झिकेर लिं,गको फेदलाई बेस्सरी अठ्याउने र वी,र्य स्खलन हुन नदिने । केही बेरमा यौ,न उत्तेजना कम भए पछि पुन: सुरु गर्ने ।
4. क’न्डम प्रयोग गर्ने : क’न्डमको प्रयोगबाट पनि कतिपयलाई शीघ्र स्ख’लनको समस्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ । यस्तो बेला चिप्लो पदार्थ कम भएको तथा बाक्लो किसिमको कन्ड’मले बढी फाइदा पुर्‍याउँछ ।
5. मांसपेशीको प्रयोग : पिसाब आउँदा रोक्ने प्रयास गर्ने मांसपेशीको कसरत गरेर वी’र्य स्ख’लनलाई रोक्ने अभ्यास गर्न सके फाइदा मिल्छ ।6औषधीको प्रयोग : अचेल छालाको संवेदनशीलता
कम गर्ने मल्हम तथा स्प्रेहरू पनि बजारमा उपलब्ध छन् । यस्ता औषधी लिं’गमा प्रयोग गर्दा शी’घ्र स्ख’लन कम गर्न मद्दत पुग्छ । 7. वी’र्य स्ख’लन नियन्त्रणको अभ्यास: दीर्घकालीन उपचारका लागि
ह’स्तमै’थुनमा जस्तै उत्ते’जित लि’ङ्ग’लाई चलाउने र वी’र्य स्ख’लन होला जस्तो भएपछि रोक्ने तथा उत्तेजना केही कम भएपछि पुन सुरु गर्ने र यो प्रक्रिया दोहार्‍याउने । वी’र्य स्खल’नलाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्छु
जस्तो लागेपछि आफ्नी श्रीमती (यौ’न साथी)सँग यौ’न’सम्पर्करहित यौ’न क्रियाकलापमा संलग्न हुने तर यौ’नसम्पर्क भने नगर्ने । वी’र्य स्ख’लन होला जस्तो भएपछि यो क्रियाकलाप रोक्ने र उत्तेजना केही कम भएपछि
पुनस् सुरु गर्ने अनि बिस्तारै–बिस्तारै यौ’न’ क्रियाकलाप अघि बढाउने । यो प्रक्रियामा समय र धैर्यता निकै लाग्ने भए पनि वी’र्य स्खलन नियन्त्रणमा यो अभ्यास निकै लाभदायक सावित हुन सक्छ । यो उपाय दीर्घकालीन समाधानमा लाभदायक हुन सक्छ ।
दीर्घकालीन समाधानको कुरा – तपाईंलाई थाहै हुनुपर्छ, धेरैजसोले यौ’न’सम्पर्क राखे पनि वी’र्य स्ख’लनलाई पुरुषको यौ’न कार्य सक्षमताका रूपमा लिन्छन् । यसरी शीघ्र स्ल’ख’न हुँदा यौ’न कार्य राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसकेको मानिन्छ ।
महिलालाई यौ’न सुख दिन नसकेको भन्ने मानेर दुखी हुने मात्र होइन, आत्मसम्मानको समस्या समेत देखापर्न सक्छ । महिलाले पनि शी’घ्र स्ख’लन हुँदा आफ्नो
पार्टनरले मलाई यौ’न सन्तुष्टि दिन सक्दैन भन्ने मान्न सक्छन् । यौ’न कार्य सम्पादनको चिन्तालाई नियन्त्रण गर्नु एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । कार्य सम्पादनको चिन्ताले धेरै कुरा बिगार्न सक्छ ।
कुनै कार्य ठिक तरिकाले हुँदैन कि भनेर चिन्ता गर्न थालिन्छ र बिस्तारै चिन्ता बढेर कार्य सम्पादन क्षमता मै ह्रास आउन थाल्छ । यो स्थितिमा वी’र्य स्ख’लनमा मात्र केन्द्रित रहेर यौ;नसम्पर्क गरिन्छ ।
कार्य सम्पादनको चिन्ता भएको स्थितिमा समस्या अझ चर्कन्छ । यस्तो स्थितिमा पहिले गरिने स्पर्श, चुम्बन, सुमसुम्याई वा पाक्क्रीडाजस्ता क्रियाकलाप पनि कम भएर जान्छन् । यसले गर्दा पुरुषमा मात्र होइन, महिलामा समेत मानसिक तनाव हुन्छ । यसले सम्बन्धको सुमधुरतालाई नै समस्यामा पार्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा दुवैले राम्रोसँग कुराकानी गरेर तनावरहित वातावरणमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ
हरेक बिहान यी काम गर्नुस गरिवी हटेर जान्छ :